आज फेरी नप’त्याउँदो गरी घट्यो सुनको मूल्य, – Eshankharapur
नङ् टोक्ने बानीले निम्त्याउँछ यस्ता खतरनाक रोगको समस्या
असोज १९ गतेसम्मका लागि सबै बन्द : कार्यालयहरु पनि नखुल्ने ! भर्खरै आयो यस्तो निर्णय
मुख्य पृष्ठ /Economic News/आज फेरी नप’त्याउँदो गरी घट्यो सुनको मूल्य,
आज फेरी नप’त्याउँदो गरी घट्यो सुनको मूल्य,
काठमाडौं / आज साताको तेस्रो दिन मगलबार, नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार १ सयमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा तीन सयले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९५ हजार ८ सय रहेको छ भने तेजावी सुनको मूल्य ९५ हजार ३ सय निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । सोमबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला १३२० मा कारोबार भएकोमा आज तोलामा १० रुपैयाँले घटेर १३१० कायम भएको महासंघले जनाएको हो ।
बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको विनिमयदर कति ?
मंगलबार अमेरिकी डलरसहित अन्य केही देशको विनिमयदर बढेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १७ रुपैयाँ ५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १७ रुपैयाँ ६५ पैसा तोकिएको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ५४ रुपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ५५ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ८६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ९१ पैसा तोकिएको छ । एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ २१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ ।
भोली ५० रुपैयाँको नयाँ नोट बजारमा आउने, हुनेछ यस्तो
जनतालाई घरभित्रै थुनेर मन्त्रीलाई तलब खुवाउन कर तिर भन्न सुहाउँछ अर्थमन्त्रीज्यू ?
सुन्दै अचम्म लाग्ने ७५ हजारमा झर्नसक्ने भयो सुनको मूल्य
आज फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य
देशैभरिका बिधालयहरुलाइ ओली सरकारबाट आयो अत्यन्तै जरुरी सुचना !